Faah faahin:- Wiil soomaali ah oo weerar argagax leh u geystay Jaamacadda Ohio (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Wiil soomaali ah oo weerar argagax leh u geystay Jaamacadda Ohio (SAWIRO)
Waxaa faaf faahin dheeraad ah laga helayaa wiil soomaali ah oo toogasho lagu dilay, kadib markii uu weerar xoogan ku qaaday Jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka, kaas oo magaciisa lagu sheegay C/risaaq Cali Cartan.
C/risaaq Cali Cartan oo da’diisa lagu sheegay 18-jir ayaa ahaa arday wax ka dhigta jaamacadda Ohio, wuxuuna qaxootinimo dalkaasi Mareykanka kusoo galay sanadkii 2014-ka, sida ay baahiyeen telefishanka CNN oo kasoo xigatay saraakiisha dambi baarista ee Mareykanka.
Saraakiisha Mareykanka ee u qaabilsan dambi baarista ee magaalada Ohio ayaa sheegay in la dilay wiilkaan ardayga ahaa kadib markii uu toorey ku dhaawacay 9 ruux oo mid ka mid ah xaaladiisu liidato, isagoo markii hore gaari uu watay weerarka u adeegsaday, kadibne ku jiiray dad badan oo ku sugnaa jaamacadda.
Gaariga uu wiilkaan u adeegsaday weerarka ayaa la sheegay inuu lahaa qof ka mid ah qoyska wiilkaas.
Ardayda jaamacadda Ohio ayaa xilliga uu weerarka socday soo xirtay qolalkooda, iyagoo irdaha laga soo galo qolalkooda ku gooyay alaabo fara badan, si aan loogu soo gelin.
Madaxa bad-qabka dadweynaha ee gobolka Ohio Monica Moll ayaa caddeysay in qofka weerarka geystay oo hadda dhintay lagu magacaabo C/risaaq Cali Cartan, waxayna intaas ku dartay inuu ka mid ahaa ardayda Jaamacadda Ohio.
Dhinaca kale, muslimiinta ku nool gobolka Ohio, gaar ahaan dadka Soomaalida ah ayaa si kulul u dhaleeceeyay weerarkan uu geystay wiilka Soomaaliga ah, waxayna weerarkaasi ku tilmaameen mid laga naxo aysan raali ka aheyn.
Dadkii yaqaanay C/risaaq Cali Cartan ayaa sheegay inuu ahaa wiil af-gaaban oo inta badan aan dadka soo dhax galin, sidoo kalena waxa uu aad ugu xirnaa masaajida ku yaala gobolka Ohio oo diinta ka baran jiray.
Ugu dambeyntii, maamulka Jaamacadda Ohio ayaa sheeay in haatan ay xaaladdu tahay mid degan, islamarkaana ciidankii howlgalka ka waday dhismaha Jaamacada lasoo gaba-gabeeyay, waxayna maamulka Jaamacdda weerarkan ku tilmaameen mid ay ka naxeen oo argagax badan ku abuuray.